FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG : Olona fito nalefa eny Tsiafahy, vehivavy iray notazomina eny Antanimora
Nahatratra folo mahery ny isan’ireo olona nohenoina teny anivon’ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny Pac etsy 67 ha. 11 janvier 2021
Nanomboka ny alakamisy lasa teo ny fanadihadiana sy ny famotorana tamin’ ireo voaroarohy ary nitohy hatramin’ny omaly maraina tamin’ny 3 ora izany. Taorian’ny fifandimbiasan’ny fihainoana azy ireo teo anatrehan’ny fitsarana mpanao fanadihadiana dia nandray fanapahan-kevitra ny Fitsarana. Miisa valo ireo olona voasaringotra tamin’ity raharaha ity izay nalefa avy hatrany notazomina am-ponja vonjimaika.
Ny fito nalefa eny Tsiafahy ary renim-pianakaviana iray kosa notazomina eny Antanimora. Vesatra hiampangana azy ireo ny fanondranana an-tsokosoko volamena, tsy fanajana ny lalàna mifehy ny ladoany sy ny harena an-kibon’ny tany, fanaovana kolikoly avo lenta sy ny fanaovana taratasim-panjakana hosoka. Tsy tapitra hatreto fa mbola mitohy ny fanadihadiana lalina ary tsy maintsy ho fantatra ireo rehetra niray tsikombakomba. Raha misy ny nanome baiko sy ny nanao tsindry tamina tompon’andraikitra izay manana fahefana eny anivon’ny seranam-piaramanidina dia tsy maintsy fantarina daholo izany, raha ny nambaran-dramatoa Minisitry ny serasera sy ny Kolontsaina.
« Hentitra ny Filoha amin’ny handravana ity tambazotra mpanondrana volamena an- tsokosoko ity »
Nitondra fanazavana mahakasika ilay fanondranana volamena an-tsokosoko milanja 73,5kg tratra tao Afrika Atsimo ny mpitondra tenin’ny Governemanta sady Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. Namaly izay mety ho endrika fiampangana diso mifandraika amin’ity raharaha ity ihany koa nandritra ny fivahinianany tao amin’ny fahitalavi-panjakana, ny faran’ny herinandro teo.
Nambarany tamin’izany fa tsy hanaiky lembenana ny fitondram-panjakana malagasy fa tsy maintsy ho fantatra avokoa izay rehetra tompon’antoka. Tambazotra goavana efa zatra manondrana ny volamena avy eto Madagasikara, hoy izy, no nanondrana an-tsokosoko ilay volamena milanja 73,5 kg.
Manoloana izany dia toromarika hentitra no nomen’ny Filoham-pirenena ny amin’ny tsy maintsy handravana sy hisamborana ireo rehetra tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. Nohamafisiny fa tsy vitan’olon-tsotra ny famoahana entana goavana tahaka izao fa efa tambazotra na « mafia » mihitsy no nanatanteraka izany. « Tsy maintsy jerena daholo ny tompon’andraikitra rehetra voakasika ao anatin’io ary ny zava-misy dia efa hita fa nisy ny atidoha nikotrika an’io fanondranana volamena io, izay efa tambazotra atao hoe « mafia » mihitsy satria na ny fomba nanaovana ny fanondranana aza dia tsy nanao ny toromarika rehetra izay tokony hatao. Jerevana somary an-tsokosoko ihany teny anivon’ny ACM fa tsy nahalala ny ladoany, tsy nahalala ny Polisim-pirenena, ny Minisiteran’ny Fahasalamana ary tsy nahalala ny zandary izay manara-maso eny amin’ny seranam-piaramanidina. Mazava ho azy fa tsy misy ny fisavana izay tokony natao teto Antananarivo », araka ny fanazavana nomeny.
Ankoatra izay dia nodisoiny tanteraka ny vaovao misy manely fa olona akaikin’ny fitondrana no tompon’ilay fiaramanidina nitondra ilay volamena nivoaka an-tsokosoko teto Madagasikara. Tsy marina velively izany, raha ny nambarany. “Azo jerena amin’ny tahirin- kevitra rehetra momba ny resaka kaompaniam-pitaterana vahiny hoe, iza ny tompon’ilay fiaramanidina. Hitako ihany fa misy fiampangana hoe olona akaikin’ny fitondrana no tompon’io, izay tena tsy mitombina mihitsy. Ary tiako hapetraka fa ny Filohan’ny Repoblika dia nanome toromarika hoe : izaho na ny fianakaviako na ireo mpiara-miasa akaiky amiko dia tsy tiako mihitsy na misy resaka iray grama ana volamena ka hahatafiditra azy ireo”, araka ny fanazavana nomeny hatrany.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2003) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021